Amazon na-ekwuwapụta ọgbọ ọhụrụ nke Fire 7 maka € 69,99 | Gam akporosis
Amazon ka webatara taa ọgbọ ọhụrụ nke mbadamba nkume ya kacha ere ihe, Ọkụ 7 na nke ahụ na - abịa site na ikike nchekwa nchekwa abụọ yana nhazi dị ike na ngwa ngwa. Ihe niile maka euro 69,99 maka ndị chọrọ ịnwe nnukwu mbadamba maka ezinụlọ.
Ọhụrụ a Ọkụ 7 ruru 16GB nke ebe nchekwa dị n'ime iji nwekwuo ohere maka chekwaa ụdị ọdịnaya dị iche iche dị iche iche enwere ike imeghari ya site na onye obula. Mbadamba ụrọ nke anyị nwere ike wụnye Google Play n'ụzọ dị otú a.
Ihe ohuru ohuru nke Fire 7 bu ihe eji eme ihe Oge ọsọ ọsọ 1,3GHz quad-isi, 16 ma ọ bụ 32GB nke ebe nchekwa dị n'ime (dabere na ihe nlereanya ịzụta), 7-anụ ọhịa IPS ihuenyo na ndụ batrị nke ruru 7 awa ihuenyo dị ka Amazon kwuru n'onwe ya.
Mbadamba ụrọ nke nwekwara Igwefoto 720p HD maka oku vidiyo ndị ahụ ma ugbu a nwere oghere 2MP. Na akụkụ na-emetụ Njikọta, ọ nwere sọrọ gbalaga na-egwu gụgharia video enweghị nsogbu ọ bụla.
Ọkụ 7 dị ebe a dị na presale maka euro 69,99 Ọ ga-ebido iru ndị niile zụrụ ya bido taa bụ ụbọchị Juunu 6. Maka ndị chọrọ itinye mkpuchi, maka 24,99 ha nwere ndị ọrụ gọọmentị na anthracite, indigo, mauve, khaki green na dark orange.
Otu n'ime ha mbadamba nkume zuru oke ịhapụ ha n'ime ime ụlọ ahụ Na ndị ahụ so n’ezinaụlọ ahụ chọrọ ịnụ ụtọ ihe nkiri, usoro, egwuregwu na ihe niile nke ọdịnaya ọ bụla nke anyị na-eji site na ngwaọrụ dị ka nke a na-anụ ụtọ ya. Mmelite na ngwaahịa nke Amazon na-erekarị na mba anyị yana ekele maka ọnụ ahịa ego ya na-aga n'ihu na-eto n'etiti ọtụtụ Fans.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Amazon na-ewepụta Ọkụ ọhụrụ 7 nwere ikike nchekwa abụọ maka € 69,99
Nwere ike ibudata igwefoto na ngwa ọdịnala nke OnePlus 7 Pro